Nordland: 30 shaqaale ka shaqeynayay barnevernka, ayaan heysan cadeynta booliska. - NorSom News
Nordland: 30 shaqaale ka shaqeynayay barnevernka, ayaan heysan cadeynta booliska.
Sida uu qoray NRK, maamulka Gobolka Nordland ee woqooyiga dalkan Norway, ayaa baaritaan ku sameeyayshan shan xarumood oo kamid ah xarumaha hey´adda barnevernka ee gobolka Nordland .
Waxeyna sadex kamid shantaas xarumood ka heleen 30 shaqaale ah oo barnevernka u shaqeeyo, kuwaas oo aan heysan warqada cadeynta ee booliska(Politiattest).
Warqada cadeynta booliska(Politiattest) ayaa ah mid muujineyso in qofku uusan danbi galin, waxaana dhamaan shaqaalaha u shaqeeyo barnevernka waajib ku ah inay warqadaas booliska ka keensadaan, kahor inta aysan shaqada xaruntaas bilaabin.
Merete Troll oo katirsan maamulka gobolka Nordland ayaa NRK u sheegtay in arintaas ay tahay mid wel-wel leh, waxeyna sheegtay in khatar u keeni karto caruurta kunool xarumaha barnevernka.
Maamulka gobolka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan baaritaanka, si ay u hubiyaan in xarumahaas ay u shaqeeyaan qaabkii loogu talagalay.
Xigasho/kilde: 30 barnevernsansatte i Nordland hadde ikke gyldig politiattest
Previous articleDaawada cudurka sonkorta oo gabaabsi kusii ah Norway oo dhan.
Next articleDenmark oo dib u bilowday dib u dajinta qoxootiga caalamiga ah.